Momba ny Baiboly: Nahoana ny Baiboly no Tokony Hahaliana Anao?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA: INONA NO RESAHIN’NY BAIBOLY?
Nahoana ny Baiboly no Tokony Hahaliana Anao?
Ny Baiboly no boky be mpitia indrindra. Mora azo mantsy izy io. Miresaka tantara tena nisy izy io, sady mitantara ny fifandraisan’ny olona teo amin’izy samy izy sy tamin’Andriamanitra. Andraisana lesona mahasoa ireny tantara ireny. Tsotra sy mivantana ny teny ampiasaina amin’izy ireny ka azo adika amin’ny fiteny an-jatony ary azon’ny olona fahiny sy ankehitriny, na aiza na aiza misy azy. Mandaitra foana koa ny toro lalan’ny Baiboly.
Voalaza ao fa boky avy amin’Andriamanitra izy io fa tsy boky momba azy fotsiny. Lazaina ao ny anaran’Andriamanitra, ny toetrany, ary ny fikasany tamin’izy namorona ny tany sy ny olombelona. Miresaka tantara mahavariana mahakasika ny olona rehetra eran-tany koa izy io: Nitady handresy ny tsara foana ny ratsy, saingy ny tsara no mivoaka ho mpandresy. Hanana finoana sy fanantenana àry ianao, raha mamaky Baiboly amin’ny saina tsy miangatra.
Misy fanazavana tsy hita na aiza na aiza ao amin’ny Baiboly. Lazainy amintsika, ohatra, ny marina momba an’ireto loha hevitra ireto:
Ahoana no nampisy antsika ary nahoana isika no mijaly?
Inona no nataon’Andriamanitra mba hamonjena ny olombelona?
Inona no nataon’i Jesosy ho antsika?
Hanao ahoana ny tany sy ny olombelona amin’ny hoavy?
Nahoana raha mijery an’ireo pejy manaraka, mba hahalalanao izay resahin’ny Baiboly?
TOPY MASO MOMBA NY BAIBOLY
Foto-kevitra: Hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana eto an-tany ny Fanjakan’Andriamanitra any an-danitra
Boky ao anatiny: Boky 39 amin’ny teny hebreo (misy ampahany kely amin’ny teny aramianina) sy boky 27 amin’ny teny grika
Mpanoratra: Olona 40 teo ho eo, nandritra ny 1 600 taona mahery, nanomboka tamin’ny 1513 Talohan’i Kristy ka hatramin’ny 98 Aorian’i Kristy tany ho any
Fiteny: Voadika amin’ny fiteny 2 500 mahery izao izy manontolo na ny ampahany aminy
Hizara Hizara Nahoana ny Baiboly no Tokony Hahaliana Anao?